Dawlad Degaanka Somalida oo ku Hawlan Helida Lafihii Dr. M S Dolal – Rasaasa News
Mar 12, 2010 ONLF
Warar hoose oo ka imanaya Jijiga xarunta dawlada degaanka Somalida, ayaa sheegaya in masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida ay dawlada dhexe u sheegtay muddo hore in ay baadi goobaan lafihii Dr. M S Dolal, oo bilowgii sanadkii hore lagu dilay gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya, codsi kaga yimid dhanka dawlada Ingriiska.
Xukuumada Itobiya ayaa waxay gacanta ku haysaa xubno hore uga tirsanaan jiray golaha dhexe ee ururka ONLF oo ay ka qab qabatay dalalka dariska, qaar kalena waxaa ay ku dhinteen dagaalo.
Xubnaha ONLF ee xidhxidhan ayey qaarkood haystaan dhalashooyin reer galbeed ah, qaarna waxay haystaan dhalashada Itobiya.
Xubnaha ONLF ee haysta dhalashada reer galbeedka ayaa qiimo gaar ah u leh Itobiya. Waxayna si gaar ah ugu xidhan yihiin xabsiyo gooniya, iyaga oo lagula gorgortamayo dalalka reer galbeedka ee ay dhalashadooda haystaan. Kuwa haysta dhalashada Itobiya ayaa iyagu ku xidhan xabsiyo ku yaal dawlad degaanka Somalida, iyada oo ay u badan tahay in la siidaayo.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan, Dr. Dolal, oo ay dishay gacan qarsoon, ayaan ilaa iyo maanta raq iyo ruux lahaynin, marka laga reebo sawiro mayd oo suuradiisa leh oo la soo dhigay Internetka.
Tan iyo xiligaas waxaa dadaal ugu jiray in ay helaan lafihiisii gabadhiisa Ms Sagal Dolal,arada WasaArimaha Dibada ee Ingriiska iyo xukuumada Itobiya. Xukuumada Itobiya ayaa raadinta ay raadinayso lafaha Dr. Dolal ayna ka ahayn kalgacal, balse doonaysa in ay lafihiisa kula gorgortanto dawlada Ingriiska ee waydiisatay, si la mid ah Bashiir Axmed Makhtal oo ay dawlada Canada doonayso in loo soo daayo.
Xukuumada Itobiya ayaa doonaysa in hadii ay hesho lafaha Dr. M S Dolal iyo Bashiir Axmed Makhtal ay si xoog leh ugu gorgortanto kuna joojiso dhaqdhaqaaqyada ururka ONLF, ee ka jira dalalkaasi.
Sida ay sheegayaan warar hoose, wasiirka arimaha dibada ee Itobiya ayaa ku amray dawlad degaanka Somalida in ay kharaj ku bixiyaan sidii lagu heli lahaa lafihii Dr. Dolal.
Dr. M S Dolal, ayaa waxaa la rumaysan yahay in kal hore ururka ONLF, oo uu ka tirsanaa ay ku dileen amar ay ka dambeeyeen xubno ururka ah oo ay siyaasad iskuhayeeneen.